Shaqaale Maaliyadeed - Million Marayaal
Waxaannu leennahay shabakad adag oo xiriir la leh hay'adaha maaliyadeed baahiyaha maaliyadeed ee qalabkaaga! Si ka duwan shirkad maalgashi shaqo abuur ah, shuraakadayada ganacsi waxay leeyihiin barnaamijyo bilow iyo ganacsiyo aasaasay oo leh amaah fiican. Badanaa, shirkadaha maalgelinta maalgelinta waxay u baahan yihiin ugu yaraan lix bilood oo ganacsi si ay ugu tixgeliyaan musharraxiinta ku habboon codsashada maalgelinta si kastaba ha noqotee xirxirista tan ayaa lagala xaajoon karaa. Shirkadda ugu wanaagsan ee maalgalinta maalgelinta ee caasimada kama dhigayso inaad sugto, waxay heli doonaan meel fog oo ay ku caawiyaan baahiyahaaga dhaqaale sida ugu dhakhsaha badan ee suurogalka ah!
Ilaa 80% qiimaha wajiga ee u qalmida qalabka loo yaqaan 'AR Inventory'
50% ilaa 70% qiyaasta dareeraha dareeraha Qalabka
50% ilaa 70% qiimaha dareeraha qalabka
Maalgelinta Amarka Iibsiga
Horumarinta Lacagta Ganacsiga
Xaqiijinta Dhismaha Dhismaha
Horumarinta Gudida Guryeynta
Gawaarida Xamuulka iyo Xawaareynta Xawaaladda
Maalgelinta Ganacsiga Ganacsiga
Kaydka Ganacsiga Suuqa iyo Ganacsiga - Kordhinta Qulqulka Lacagta iyo kor u qaadista Dakhliga Saarka ah ee Shaqada
Waxaan bixinaa khibrad iyo adeegyo maaliyadeed oo ballaaran oo ballaaran oo lagu maalgeliyo iibsadayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha wax ka qabashada raasamaalkooda shaqada iyo shuruudaha maaraynta halista.
Qorshaheena maaliyadeed ee silsiladaha agabka waxaa ku jira xalal qaabeysan oo qaabeysan oo loogu talagalay in lagu xoojiyo silsiladaha bixinta agabyada caalamiga ah iyo kuwa gudaha iyadoo la ilaalinayo raasamaal shaqeynaya loona oggolaanayo ganacsiga in lagu maalgeliyo qiimo hoose.